Apple iPhone 14 dia hanova ny mpampitohy Lightning ho USB-C | TeraNews.net
Apple iPhone 14 dia hanova ny mpampitohy Lightning ho USB-C
finday avo lentatakelaka
mpanoratra Nikitin Eugenius Navoaka tamin'ny 20.11.2021
Ny fampiroboroboana ny fampivondronana ny connecteurs ho an'ny finday sy takelaka any Eropa sy Etazonia dia mametraka fanerena be amin'ny Apple. Noho izany, efa amin'ny taona 2022 dia misy ny mety hanovana ny mpampitohy Lightning ho USB-C ny iPhone 14. Izany rehetra izany dia voafaritry ny mpanamboatra mba hampihenana ny fiantraikany ratsy amin'ny tontolo iainana. Na izany aza, ny olana dia tsy voaresaka nandritra ny taona voalohany. Ary ny orinasa dia afaka nanao dingana tamin'io lalana io hatry ny ela.
Na inona na inona resahin'izy ireo ao anatin'ny rindrin'i Apple momba ny fiarovana ny natiora, dia hafa kely ny fototry ny olana. Ny interface Lightning, novolavolaina tamin'ny 2012, dia miasa amin'ny ambaratonga USB 2.0. Izany hoe, efa ho 10 taona ny orinasa dia nihemotra lavitra tamin'ny teknolojia fampitana angon-drakitra. Ary ny fifindrana mankany amin'ny fenitra USB-C dia mifandray amin'izany.
Ohatra, hamindra 2 ora amin'ny horonan-tsary 4K, ny interface taloha dia haharitra 4 ora eo ho eo. Ary ny USB-C dia hamindra horonantsary ao anatin'ny 2.5 ora. Ny olan'ny tselatra koa dia misy fiantraikany amin'ny hafainganan'ny fiampangana, miaraka amin'ireo fahasahiranana rehetra aterak'izany. Ary eto dia manana vahaolana 2 i Apple - hampiasa USB-C na hamorona interface vaovao.
Tsy azo inoana fa hamorona mpampitohy vaovao ny mpanamboatra, na dia azo atao aza ny zava-drehetra. Saingy afaka miditra amin'ny interface miray tsy misy vidiny ianao. Ny fahafantarana ny politikan'i Apple amin'ny fitahirizana vola amin'ny fivoarana farany, dia andrasana ny fanapahan-kevitra hifindra amin'ny USB-C.
Philips PH2 - telefaona finday ho an'ny zokiolona
POCO M4 Pro 5G dia finday mahaliana amin'ny vidiny mirary
Xiaomi dia manambara fihenam-bidy lehibe amin'ny vokatra
Ny smartphone smartphone Sharp Aquos Zero 6 dia samurai tena izy